ukunakwa iziyaluyalu futhi ADHD: lokho abayikho futhi yini okufanele uyenze
Lezi yizimo ezibonakaliswa ubunzima ekunakekeleni ukunakwa. Baziveza ngezindlela ezahlukahlukene (ubunzima bokuhlala bukhona, ubunzima bokulinda ithuba labo, iziphazamiso nokunye okuningi) futhi benza ukuba khona kwabo kuzizwe ngezimo eziningi ezinjengokuthi, ngokwesibonelo, isikole.
Ulapha: Ikhaya » Ochwepheshe » Izihloko » Ukuphazamiseka kwengqondo
Lezi yizimo ezibonakaliswa ubunzima bokunakwa okungenzeka bukhona izindlela ezahlukene futhi zingabonakala noma yimuphi ubudala. Into ejwayelekile ngokusobala i ukungabi nalutho attentional, kepha, incazelo engacacile ngoba izinhlobo zokunakwa ziningi futhi ukuguqulwa kwazo okuhlukile kubandakanya izimpawu ezihlukile. Isiphithiphithi esidume kakhulu kule ndawo ngokungangabazeki yiADHD (ukunakwa kokuqothuka kwe-hyperaciture disorder), kepha ukunaka okungaphakathi kungenye yezinkinga ezivame kakhulu kubantu abanazo ukulimala kwengqondo (imvamisa kubangelwa ukulimala ekhanda noma unhlangothi).
Ukujula: Kuyini ukunakwa
Uyasebenza: Zonke izinto zethu zamahhala (imidlalo namakhadi) ukuqeqesha ukunakwa
Ezinganeni, lezi zimo kumele zihlukaniswe njalo nokuphila okujwayelekile. Labo abaletha lolu hlobo lwenkinga bangayiveza ngezindlela eziningi:
ukunaka kabi imininingwane kanye namaphutha (esikoleni noma emsebenzini) ngenxa yokunganaki;
ukunakwa okuncane emsebenzini wesikole noma emidlalweni;
ukuthambekela ungalandeli imiyalo noma ukungenzi imisebenzi yomuntu (isikole, umsebenzi noma ikhaya);
ukugwema imisebenzi edinga ukuzinikela kokunaka;
ukulahleka kwezinto okudingekile ngemisebenzi yabo;
ubunzima bokuhlala, noma ezimweni lapho kulindeleke ukuthi uthule;
ukuthambekela kokugijima nokukhuphuka (ikakhulukazi ezinganeni) ezimeni ezingafanele;
ukuphoqelelwa (izimpendulo ngokungxama ngaphandle kokuvumela imibuzo iphele, ubunzima bokulinda ithuba lakho, kokuphazamiseka izinkulumo zabanye e nokuziphatha okungathandeki).
Ebantwaneni lobu bunzima buvame ukuholela ukusebenza kabi kwezemfundo, kubhebhethekisa ubudlelwano nontanga, ukugxeka okuvela kubantu abadala, umuzwa wokungafaneleki, ukukhathazeka kanye nokuzithoba, okuthi kwandise izinkinga eziyisisekelo.
Okusanda kushiwo kaningi uphikelela ebusheni kanye nokuba mdala noma ngabe izibonakaliso ziguquka: i-hyperactivity ithathelwa indawo yi-a umuzwa wangaphakathi wokuphazamiseka futhi ukunganakwa kuqokonyiswa inhlangano engeyinhle yemisebenzi yayo ezihumusha zibe yisikole esimpofu, umsebenzi kanye nokusebenza komphakathi.
Ukujula: I-Dyslexia nokunakwa: buhlobo obunjani?
Ukushoda kokunaka kuvame ukubonwa ngesikhathi esisodwa kokuhlaziywa olwenziwe ngudokotela wezifo zengqondo kanye / noma i-neuropsychiatrist yezinsana (evame ukusekelwa ezinye izibalo ezikhethekile kulezi zinkinga). L'inqubo yokuxilonga kuvame ukunikeza ukuqoqwa kolwazi kusuka kwimithombo ehlukene (njengabazali, othisha kanye nesiguli uqobo) ngezingxoxo ezakhiwe ngokwedlule kanye / noma nemibuzo, izingxoxo neziguli namalungu omndeni kanye una ukuhlolwa ngokuphelele (bheka uhlu lokuhlola ukunaka lapha) ukwazi ubunzima namandla womuntu okukhulunywa ngaye.
Ukujula: Ukuhlolwa kokunaka: izivivinyo ezisetshenzisiwe
Ukuthola isivivinyo esifaneleka kakhulu: I-TrovaTest
Isibuyekezo sokuhlola: I-BIA: Ibhethri lase-Italy le-ADHD
Ekupheleni kwenqubo yokuxilonga ingabekwa ukungenelela okuqondene nomuntu kususelwa kuphrofayela yesiguli, efana ne ukuqeqeshwa kwabazaliit ukuqeqeshwa kwengqondo, i-psychotherapy (lapho kufanelekile) futhi, ezimweni lapho kutholakale khona ukutholakala kwe-ADHD kakhulu, ukwelashwa ngezidakamizwa (ikakhulukazi uma ezinye izindlela zingazange ziveze imiphumela oyifunayo). Ngokwesimo sesikole, umfundi onesifo sokunaka angasebenzisa ithuba loku 2012 BES umthethonqubo (nesihlobo wenze ngokwezifiso uhlelo lwe-didactic) noma umthetho 104 ka-1992.
Ukujula: Izinto zethu zamahhala ukusebenza nge-Attention nemisebenzi ephezulu
Ukubuyekezwa kwethu: Ukunakwa kanye okuhlushwa - Impulsiveness kanye nokuzithiba - Ukuqeqeshwa komzali kwe-ADHD - I-ADHD nomsebenzi wesikole - I-BIA Italian Battery ye-ADHD
TheADHD (ebizwa nangokuthi "hyperkinetic syndrome"Ngokwesigaba se-ICD-10) ukuphazamiseka kokuziphatha okubonakala ngezimpawu ze ukunganakwa kanye / noma ukungakwazi ukuqaphela kanye nokuqina kokuqina okuthinta kabi ukusebenza kanye nokusebenza ezimeni eziningi, esikoleni nasekhaya (I-APA, i-1994). Kubantu abangu-80%, izimpawu ziyaqhubeka ziye ebusheni nasebudaleni, okuholele emiphumeleni ebalulekile uma kungalawulwa ngokucophelela (UFaraone et al., 2003). Ngempela, sekuvele ukuthi lokhu kuphazamiseka kwandisa ubungozi bezinga eliphansi lezenhlalo, ubudlelwano obungebuhle phakathi kwabantu, ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa nezenzo ezinobudlova (UBiederman et al., 1997). THE umndeni wengane ethintwe yile ndlela yokugula kwesinye isikhathi iveza izinkinga ezihambisana nazo ezingabekwa ngokwesibonelo ngu ukukhuphuka kwezinga lokucindezela, ukudangala kanye nokungaboni ngaso linye emshadweni (UMash, & Johnson, 1993; Murphy, & Barkley, 1996). Kubalulekile ukucacisa ukuthi lawa akuwona amaqiniso aphelele kepha angama- izingozi ezingabakhona, okungukuthi, kungaba iphutha elikhulu ukwenza ukuzihlanganisa okuzenzakalelayo phakathi koyedwa uphethwe I-ADHD nezinkinga zisanda kuvezwa.
Izingane ezinale nkinga zivame ukuchaza kakhulu distractible, ngaphandle kokufuna ukubamba iqhaza emisebenzini efuna ngenkani, unesithukuthezi kalula, ngokunaka okuningana ngemininingwane, othambekele ekulahlekelweni yizinto, engathandi ukuqedela umsebenzi wesikole, ephuza ukuqonda nokwenza iziyalo.
Ziyakwazi ayikwazi ukuhlala ithule, sengathi ivuselelwa yisithuthuthu, avele baphelelwa yisineke, nge ukulawulwa okungafanele kokuphathwa kabi.
Ngasinye salezi zimpawu singaba khona ekuziphatheni kwezingane eziningi, kepha kwezinye izimo kubhekiswa njengokuphazamiseka, okusho ukuthi lapho konke lokhu kudala ukuphazamiseka okukhulu emisebenzini yansuku zonke.
Njengakwezinye izikhathi, imikhakha yokuxilonga emkhakheni wezengqondo ikhombisa izindawo ezinkulu ezibandakanya abantu abanamaphrofayili ahluke kakhulu. L 'ADHD akunjalo. Kulesi simo esithile, umehluko omkhulu ungancika ekuhlukeni kwe-IQ, izinga lokukhubazeka kokunakwa kanye imisebenzi ephezulu (ikakhulukazi maqondana nezakhi ezingaphansi kwawo) nezinye izimo ezivame ukuhlotshaniswa nesifo se-hyperkinetic (ngokwesibonelo, ukuphikisana nokuphikisana nokuphikisana, ukuphazamiseka kokuziphatha, ukuphazamiseka kokukhathazeka, nokuphazamiseka kwemizwelo, dyslexia, dyscalculia, dysgraphia, dysorthography futhi, kaningi, isifo sokuphoqelela esinamandla, ukuphazamiseka kwengqondo kanye nokuphazamiseka kwengqondo (i-AAP, 2000; Rader et al., 2009).
Lingaza la makhono ngokuqondile ivumela ukukala a ukwelashwa ngokunemba ngangokunokwenzeka.
ADHD, izinkinga zokunaka, hyperactivity
Ukuphazamiseka kwengqondo2015-03-182020-10-16http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2015/03/StuartMiles.jpg200px200px
Ukuphazamiseka kwengqondo ngenxa yokulimala kobuchophoImibhalo, Imivimbo, Izindikimba
Ukuphazamiseka kokufunda okungacacisiweKufundwa, Izindikimba